သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်စေမယ့် အစားအသောက်များ။
Home Child Nutrition သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်စေမယ့် အစားအသောက်များ။
အလုပ်တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းမှဖြစ်မှာပါနော်။ အဲ့ဒါကြောင့် ချစ်မေမေတို့ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေကို အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းမွန်စေချင်တယ်ဆိုရင်….
ချစ်မေမေတို့ရေ…။ သားသားမီးမီးလေးတို့ကို စာတော်စေချင်၊ ထူးချွန်စေချင်ကြတယ်မဟုတ်လား။ ဒါဆို အကျိုးရှိတဲ့စာတွေလည်း များများဖတ်၊ ကျောင်းစာတွေကိုလည်း သေချာလေ့လာကျက်မှတ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ ဒီအတွက်လည်း ဦးနှောက်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုစွမ်းအားက ကောင်းမွန်နေဖို့ မလိုအပ်ဘူးလား??? အဲ့ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ သားသားမီးမီးလေးတို့ရဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုတိုးတက်စေဖို့အတွက် အထောက်အပံ့ကောင်းဖြစ်စေနိုင်မယ့် အစားအသောက်တွေကို မျှဝေပေးလိုက်ရပါတယ်။
ဆဲလ်မွန်ငါးမှာ Omega-3 အက်ဆစ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တာကြောင့် သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေပြီး စာသင်တဲ့အခါ၊ စာကျက်တဲ့အခါမှာတင်မဟုတ်ဘဲ တစ်ခုခုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်း အာရုံစူးစိုက်မှုကို မြင့်တက်စေပါတယ်။ နောက်ပြီး တူနာငါးမှာလည်း Omega-3 အက်ဆစ်တွေပါဝင်ပါသေးတယ်နော်။ ဆဲလ်မွန်ငါးလောက်တော့ ပါဝင်မှုနှုန်းမများဘူးပေါ့။ ဆဲလ်မွန်ငါး၊ တူနာငါးတို့ကို ဆန်းဒွစ်ချ်လုပ်ပြီး ကျွေးမယ်ဆိုရင် သားသားမီးမီးတို့အကြိုက်ဖြစ်မှာ သေချာပါတယ်။
ကြက်ဥ၊ ဘဲဥတို့မှာ ပရိုတိန်းဓာတ်ကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဦးနှောက်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုနဲ့ မှတ်ဥာဏ်စွမ်းအားကို တိုးတက်စေနိုင်တဲ့ Choline တို့ ပါဝင်ပါတယ်။ မနက်စာအတွက် ပေါင်မုန့်ကြက်ဥကြော်၊ နေ့လယ်စာအတွက် ကြက်ဥကြော်၊ အဆာပြေအတွက် ကြက်ဥပြုတ် အစရှိသဖြင့် အမျိုးမျိုး စီစဥ်ကျွေးမွေးနိုင်ပါတယ်နော် ချစ်မေမေတို့။
ကွေကာအုပ်ကနေတစ်ဆင့် ဂလူးကို့စ်ကြွယ်ဝစွာရရှိနိုင်ပြီး ဗီတာမင်ဘီဓာတ်လည်း ပါဝင်နိုင်တာကြောင့် ဦးနှောက်ရဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေပါတယ်။
စတော်ဘယ်ရီသီး၊ ချယ်ရီသီး၊ ဘလူးဘယ်ရီသီးနဲ့ဘလက်ဘယ်ရီသီးတို့မှာပါဝင်တဲ့ ဗီတာမင်စီကြွယ်ဝစွာပါဝင်ပြီး ဒီအသီးတွေမှာပါဝင်တဲ့ Antioxidant တွေက ကင်ဆာရောဂါကိုလည်း ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်တဲ့။ နောက်ပြီး ဒီဘယ်ရီသီးတွေမှာ Omega-3 အက်ဆစ်ဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်တာကြောင့် သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ အာရုံစိုက်နိုင်စွမ်းကို တိုးတက်စေမှာ အသေအချာပဲပေါ့နော်။
၅။ နို့၊ ဒိန်ချဥ်နဲ့ ချိစ်။
ဒီနို့ထွက်ပစ္စည်းတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ ပရိုတိန်းဓာတ်နဲ့ ဗီတာမင်ဘီဓာတ်တွေက ဦးနှောက်ရဲ့တစ်ရှူးတွေကို ကောင်းစွာဖွံ့ဖြိုးစေပါတယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှုဆိုတာက ဦးနှောက်ကစတဲ့ အခြေခံတစ်ခုပဲလေ။ နောက်ပြီး ဒီအစားအစာတွေက သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ အရိုးတွေကိုလည်း ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးစေတာကြောင့် တစ်ချက်ခုတ် နှစ်ချက်ပြတ်ပဲမဟုတ်လား။
ပရိုတိန်းဓာတ်၊ အမျှင်ဓာတ်တွေအပြင် ဗီတာမင်နဲ့သတ္တုဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာပါဝင်တဲ့ ပဲက သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ဦးနှောက်ကို အထူးကောင်းမွန်စေမှာသေချာပြီး ကိစ္စတစ်ခုအပေါ်မှာလည်း သေချာအာရုံစိုက်နိုင်အောင် အကူအညီပေးနိုင်ပါတယ်နော်။
ခရမ်းချဥ်သီး၊ ကန်စွန်းဥ၊ ဖရုံသီး၊ မုန်လာဥနဲ့ ဟင်းနုနွယ်ရွက်တို့လို အရောင်စုံဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်စေနိုင်တဲ့ Antioxidant တွေ အပြည့်အဝပါဝင်ပါတယ်။ လတ်ဆတ်တဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကို ကျွေးလို့ သားသားမီးမီးတို့အတွက် ဘာဘေးဥပါဒ်မှမရှိပါဘူးနော်။ ပုံမှန်ဆို ဟင်းသီးဟင်းရွက်အမြဲကျွေးဖို့ မေ့လျော့နေကြပေမယ့် သားသားမီးမီးတို့ရဲ့ ဦးနှောက်နဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုနှုန်းတွေကို တိုးတက်စေချင်တယ်ဆိုရင်တော့ မဖြစ်မနေကျွေးပေးကြပါနော်။
ချစ်မေမေတို့ရေ…။ အလုပ်တစ်ခုကို အောင်မြင်စွာအကောင်အထည်ဖော်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင် အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းမှဖြစ်မှာပါနော်။ အဲ့ဒါကြောင့် ချစ်မေမေတို့ရဲ့ သားသားမီးမီးလေးတွေကို အာရုံစူးစိုက်မှုကောင်းမွန်စေချင်တယ်ဆိုရင် အခုပြောပြပေးခဲ့တဲ့ အစားအသောက်တွေကို မမေ့မလျော့နဲ့ သင့်တင့်မျှတစွာ ကျွေးမွေးကြပါလို့ အကြံပြုလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
Source: webmd, bbcgoodfood
Previous articleသားသားမီးမီးတို့ရဲ့အသက် (၁၂) နှစ်အရွယ်မှာ မဖြစ်မနေသင်ကြားပေးထားရမယ့်အရာများ
Next articleကိုယ်ဝန်ဆောင်မေမေတို့ အလွယ်တကူပြုလုပ်နိုင်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်းများ။